Tsy hifandray amin'ny Wi-Fi ny iPhone. Ity ny The Fix! - Iphone
ny fomba fananganana famandrihana tsy misy tariby
menaka voa mainty ao anaty Baiboly
midika hoe oroka amin'ny handrina
Tsy hifandray amin'ny Wi-Fi ny iPhone. Ity ny The Fix!
Tsy hifandray amin'ny Wi-Fi ny iPhone-nao ary tsy fantatrao ny antony. Angamba mifandray ny solosainao, angamba mifandray ny iPhone an'ny namanao, na mety tsy misy fitaovana hifandray mihitsy. Angamba ny iPhone-nao dia mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi rehetra afa-tsy iray, na angamba tsy mifandray amin'ny tambajotra mihitsy.
Betsaka ny maybes raha ny amin'ny famaritana sy famahana ity olana ity, fa hanampy anao hatrany amin'ny farany ambaniny aho. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aho maninona ny iPhone-nao tsy hifandray amin'ny Wi-Fi SY manampy anao hamaha ny olana , na amin'ny iPhone na amin'ny router tsy misy tariby.
Mandritra izany fotoana izany, ao amin'ny The Genius Bar…
Nisy mpanjifa niditra ary nilaza fa tsy hifandray amin'ny Wi-Fi ny iPhone. Nangataka ny mpanjifa hifandray amin'ny Wi-Fi ao anaty fivarotana ilay teknisianina, ary matetika izy io mandeha. Izany no dingana voalohany hamaritana ity olana ity, ary ny fanontaniana voalohany tokony apetrakao amin'ny tenanao:
fomba voajanahary hialana ireo ana-nofo
“Hifandray amin'ny iPhone ve aho misy Tambajotra Wi-Fi, sa rariny izany iray tambajotra tsy hifandray amin'ny iPhone-ko? '
Raha tsy manana tamba-jotra Wi-Fi hafa ianao hizaha toetra ny iPhone dia mankanesa any amin'ny Starbucks, ny tranombokinao eo an-toerana, na ny tranon'ny namanao ary andramo ny mifandray amin'ny Wi-Fi azy ireo. Raha mifandray ny iPhone-nao dia tsy olana eo amin'ny sehatry ny fitaovana izany - misy olana eo amin'ny iPhone sy ny router tsy misy taribyo ao an-trano.
Fanamarihana: Raha tsy mifandray ny iPhone-nao misy tamba-jotra tsy misy tariby, mandingana ny faritra amin'ity lahatsoratra ity antsoina hoe Fafao ireo tambajotra Wi-Fi rehetra voatahiry ao aminao iPhone .Raha tsy mandeha izany dia mandehana mankany amin'ilay faritra antsoina Famaritana olana momba ny fitaovana . Zahao ny lahatsoratro hafa raha Ny Wi-Fi dia volondavenona ao anaty Settings !
Ny fanamboarana tsotra indrindra
Raha mbola tsy nanao izany ianao dia andramo vonoina ny router iPhone sy Wi-Fi anao, ary avereno indray izy ireo.
Amin'ny iPhoneo dia tsindrio ary tazomy ny bokotra herinaratra mandra-pahatongan'izany solafaka hiala amin'ny herinaratra miseho. Alefaso amin'ny rantsan-tananao ny efijery ary miandry ny famonoan'ny iPhone anao. Mety maharitra 15 segondra na mihoatra ny famonoana ny iPhone. Manaraka izany, tazomy ny bokotra herinaratra mandra-pahitanao ny sary famantarana Apple hita eo amin'ny efijery.
Hampiasa paikady teknika be izahay hamonoana ny router Wi-Fi anao ary hiverina: Esory amin'ny rindrina ny tariby ary ampidiro indray izy.
Aorian'ny famerenan'ny router anao, andramo mampifandray ny iPhone amin'ny Wi-Fi. Raha mandeha io dia misy olana amin'ny rindrambaiko namboarina ao amin'ny router-n'ny router anao (indraindray antsoina hoe firmware). Vitsy ny olona mahatakatra ny fomba fiasan'ny tambajotra Wi-Fi. Ny router Wi-Fi rehetra dia mampiasa fitaovana mitovy aminy amin'ny famoronana tambajotra tsy misy tariby, fa ny rindrambaiko namboarina tamin'ny router Wi-Fi dia miovaova arakaraka ny modely.
Tahaka ny amin'ny iPhone sy ny solosainao, ny rindrambaiko natsofoka tao amin'ny router tsy misy tariby dia mety hianjera. Ny router dia mety mbola handefa ny tambajotra Wi-Fi, saingy tsy mamaly ilay rindrambaiko natsangana rehefa manandrana mampifandray ny fitaovana iray. Raha mamerina ny olana ny famerenana ny router tsy misy tariby anao dia azonao atao ny manamarina ny tranokalan'ny mpanamboatra raha toa ka misy rindrambaiko (na rindrambaiko) fanavaozana ho an'ny router. Ny fanavaozana ny lozisialy dia afaka manakana ny olana tsy hiverina.
Rehefa mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi rehetra ny iPhone-nao, afa-tsy iray
Ity scenario ity dia manahirana be ny mamantatra ny olana, indrindra amin'ny Apple Store. Matetika dia tsy afaka mamerina ny olana ny mpanjifa satria ao an-trano ihany no mitranga. Ny tsara indrindra azon'ny teknisianina atao dia ny manome torohevitra iraisana, hamerina ny toerana misy azy ary mirary soa ny mpanjifa. Manantena aho fa hanampy kokoa noho izany ny ity lahatsoratra ity, satria tsy toy ny Genius ianao, afaka mitondra azy mody miaraka aminao.
Alohan'ny hilentika lalindalina kokoa dia hitako fa manampy ny famerenana ny olana: Tsy hifandray amin'ny Wi-Fi ny iPhone-nao satria misy olana amin'ny iPhone-nao na ny router tsy misy tariby. Mora kokoa ny mamantatra ny olan'ny iPhones, ka hanomboka eo izahay.
Olana amin'ny iPhones sy ny tambajotra Wi-Fi
Tsaroan'ny iPhones ny tambajotra Wi-Fi rehetra izay nifandraisan'izy ireo, miaraka amin'ny teny miafina isaky ny tamba-jotra. Rehefa mody avy any am-piasana isika dia mifandray indray amin'ny telefaona Wi-Fi ao an-trano ny iPhones ary mampiditra ny teny miafina. Farafaharatsiny mba tokony ho izy ireo.
Iray amin'ireo tombony lehibe azo amin'ny iPhone, ary ny zavatra itarainan'ny geeks foana dia io tsotra, ary noho izany voafetra amin'ny fahaizan'ny mpampiasa 'mandeha ambanin'ny hood' hamaritana olana iray. Tsy toy ny Mac na PC-nao, ny iPhone-nao tsy afaka mampiseho ny lisitry ny tamba-jotra Wi-Fi voatahiry nandritra ny taona maro. Azonao atao ny 'manadino' tamba-jotra Wi-Fi, saingy raha efa mifandray aminy ianao.
Alefaso ny Wi-Fi hiala ary hiverina
Dingana iray haingana rehefa tsy mifandray amin'ny Wi-Fi ny iPhone dia mamono haingana ny Wi-Fi ary miverina. Eritrereto izany toa ny famonoana ny iPhone-nao sy ny famerenany azy - manome fanombohana vaovao sy làlana faharoa ho an'ny iPhone hanao fifandraisana madio amin'ny Wi-Fi izany.
Sokafy ny fampiharana Settings ary kitiho ny Wi-Fi. Avy eo, kitiho ny switch eo akaikin'ny Wi-Fi eo an-tampon'ny menio. Andraso segondra vitsy, avy eo ahodina ny W-Fi hiverina!
Fafao ireo tambajotra Wi-Fi rehetra voatahiry ao amin'ny iPhone-nao
Manaraka izany, andramo avereno tanteraka ny data database an'ny iPhone an'ny tamba-jotra Wi-Fi. Io dia manamboatra ny olana matetika, ary izany rehetra izany dia manala ny mety hisian'ny olana amin'ny lozisialy amin'ny iPhone-nao no mahatonga ny olana. Mandeha Fikirana -> Ankapobeny -> Haverina ary misafidy Avereno ny fametrahana ny tambajotra .
Tsy maintsy mifandray indray amin'ireo tamba-jotra Wi-Fi anao ianao ary mampiditra ny tenimiafiny indray, ka alao antoka fa fantatrao ireo manan-danja alohan'ny hanombohanao. Andramo ny mifandray indray amin'ny router tsy misy taribyo aorian'ny famerenan'ny iPhone. Raha mbola tsy hifandray dia tonga ny fotoana jereo ny router tsy misy tariby . Hasehoko anao ny fomba fanamboarana azy amin'ny pejy manaraka amin'ity lahatsoratra ity.
Pejy (1 amin'ny 2):
“Voageja ny iPhone-nao!” Ara-dalàna ve? Tsia!
Maso roa samy hafa fandokoana dikany ara-panahy
Ahoana ny famerenana iPhone amin'ny iCloud amin'ny iOS 12: Torolàlana haingana!
Ahoana ny fomba hanovako ny ringtone amin'ny iPhone? Ny tena fanamboarana.
Sary tsy hita amin'ny iPhone? Ity ny antony & Ny tena fanamboarana!
Fa maninona no mitohy mikatona ny Facebook sy ny iPad-ko ny Facebook? The Fix!
Ny iPhone dia miteny hoe tsy misy serivisy. Ity ny The Real Fix!
Tsy mandeha ny iPhone Keyboard? Ity ny antony & Ny tena fanamboarana!
Inona no dikan'ny hoe manonofy vorondolo?
Fa maninona no Wi-Fi maty volo eo amin'ny iPhone? Ity ny The Real Fix!
Lolo mainty dikany
Manjavozavo ny fakantsariko iPhone! Ity ny antony sy ny tena vahaolana.
Ahoana ny famonoana ny famirapiratan-tena eo amin'ny iPhone: ny famerenana haingana!
Midika ny famonoana orona ao amin'ny Baiboly
Jack iPhone Headphone Vaovao: Ny endrika tsy mbola hitanao!
Afaka mitondra parasy hody avy any an-tranon'olona ve aho?
Ahoana ny fomba fanaovana haba voalohany
Netflix Tsy miasa amin'ny iPad? Ity ny The Real Fix!
DITIZIDOL FORTE - Inona no ilana azy, Dosis, Fampiasana ary vokany hafa